Global Voices teny Malagasy » Emirà Arabo Mitambatra : Fahatezerana noho ilay Fampisehoan’i Madonna Tao Risqué · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jolay 2012 10:25 GMT 1	 · Mpanoratra Salah Almhamdi Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Emirà Arabo Mitambatra, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Nanomboka ny fitetezam-paritra tany Afovoany tsinanana sy Afrika Avaratra  tamin'ny 1 Jona IiMadonna ka nanatanteraka  ny fampisehoany voalohany tao Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra, ny 3 sy 4 Jona. Niteraka fifandirana ny fampisehoana noho ny fitafian'i Madonna sy ny lohahevitra ataony mirona amin'ny fanintonan'ny nofo
Miatrika fanoherana avy amin'ny antokon'olona mpandala ny nentin-drazana any amin'ny fiaraha-monina hatrany ny mpihira any amin'ny firenena silamo; foana  moa ny fampisehoana tokony ataon'i Lady Gaga ao Indonezia noho ny fanerena nataon'ireo mpitahiry ny nentin-drazana sy ny mpitana ny fihenjanana. Tsy nety ihany koa ny fotoana satria taorian'ilay Famonoana tao Houla  tany Syria no saika hanaovana azy. Voatsikeran'ireo mpisera Twitter noho ny antony maro i Madonna.
@halaZadeh : Mandray an’I Madonna any Abu Dhabi, mamantatra azy, avy eo mitsikera sy manivaiva azy eny rehetra eny!
@EasyAsPieMmmPie : Fantatrao ve ny olona tsy mba miraharaha momba ny #UAEDressCode (lalàn’ny fomba fiakanjo any UAE)? Madonna, tany Abu Dhabi, na taiza aiza tokoa
@kwhammadi : Vokovoko lehibe ao amin’ny saikanosy Arabo ho an'ilay mpandihy adala… ianareo zanak’I Zayed, tsy mba misy olon-kendry ve ao aminareo!!!
@mr_mns : profesora Emirati miezaka ny hampitony anay ka milaza ny fitafin'i Madonna ho tsotra ary tsy mahita fombam-piangonana nentin’ity farany nanombohana ny fampisehoana raha tokony vavaka ho an’ireo rahalahintsika [any Syria] no natao.
Mampiseho kisarisarim-pivavahana ny fampisehoan’ny Madonna. Nisioka ny heverina ho fifandraisan'i  Madonna amin’ny Illuminati  I Hamad Al-Shirawi:
@Hamad_AlShirawi : Aza asiana fampisehoana illuminati be manadala intsony azafady. #Madonna
Nanoratra  ny Bilaogera ivelan'ny tanindrazana Pam fa:
@KhaledAlSaqaby : Ny Haino aman-jery maloto no iray tamin’ireo nandray anjara tamin’ny fampanekena vahoaka 25000 ilay mari-pamantarana (nateraky ny mpamosavy) noho izy ireo nandray anjara nandritra ny taona maro ny hamonoana ny fireharehana.
Thomas O’Hara bilaogera Amerikana nisintaka ny tanindrazana, nampiseho hoe :
Bilaogera Mohamed Alfraj naneho  [ar] hoe
@IbrahimAlharam : Ao amin’ny fanjakana [Arabia Saodita] namaly ny antson’ny tanora Saodiana ireo mpandraharaha ara-barotra momba ny fanafoanana ilay fihaonana mahamenatra miaraka amin’ny Rosiana, nefa eto amin’ny fireneko navelan'izy ireo #Madonna_mandihy_amin’ny_fahoriantsika
Na izany aza, Ahmed Ali-Gargaoui Bilaogera Emirati nanoratra  fa mampiady hevitra amin'ny ankapobeny ny zavatra fanaon'i Madonna
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/14/34414/
 fitetezam-paritra tany Afovoany tsinanana sy Afrika Avaratra: http://en.wikipedia.org/wiki/MDNA_Tour
 Famonoana tao Houla: https://globalvoicesonline.org/2012/05/28/syria-houla-massacre-creates-international-outcry/
 lalàna momba ny fiakanjo: http://en-maktoob.news.yahoo.com/demand-for-law-on-uae-dress-code.html
 nampiseho hoe: http://tomodhabi.blogspot.com/2012/06/madonna-and-hunger-striker.html